डा. केसीको काम नै अनसन बस्ने र त्यसलाई नेपाली समाजले पचाइसक्यो : पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड — Harpraharnews.com
डा. केसीको काम नै अनसन बस्ने र त्यसलाई नेपाली समाजले पचाइसक्यो : पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड
८ श्रावण २०७५, मंगलवार July 25, 2018 हरप्रहर न्युज
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले डा. गोविन्द केसीको अनसनको बलमा सरकारविरुद्ध आन्दोलन गरेकोमा चर्को आलोचना गरेका छन् ।
अनसनरत डा. गोविन्द केसीको काम नै अनसन बस्ने भएको र त्यसलाई नेपाली समाजले पचाइसकेको भन्दै उनले कांग्रेसले आन्दोलन गरेकोमा आक्रोश पोखे ।
पुष्पलाल स्मृति दिवसको अवसरमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा प्रचण्डले डा. केसीको जीवन रक्षाको दायित्व सरकारको भएको बताए । उनले अघि भने, ‘तर, अर्को पक्ष गम्भीर छैन । तथाकथित लोकतान्त्रिक भन्ने तागत शायद उहाँको हत्या गर्न चाहन्छ, लासको राजनीति गर्न चाहेको हो कि भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।’
उनले डा. केसीसँग वार्ता गर्न र आवश्यक परे लचिलो हुन सरकार तयार रहेको बताए । ‘तर, कांग्रेसले खोजेको के हो ? डा. केसीको पुच्छर समाएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हरण गर्न खोजेको हो ?’ पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका प्रचण्डले प्रश्न गरे, ‘कांग्रेस यति निम्छरो, कमजोर र अलोकतान्त्रिक भइसकेको हो ?’
आइतबार मात्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र आफूले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग छलफल गरेर सहमति गरौं भनेको सुनाउँदै उनले भने, ‘उहाँले डा. केसीलाई सहमति गरे हुन्छ । नभए हाम्रो आन्दोलन जारी रहन्छ भन्नुभयो ।’
प्रचण्डले आफ्नो निष्कर्ष सुनाए, ‘यही बुद्धि हो भने कांग्रेस अब सिद्धियो । यो अवसानको बाटो हो ।’
हिजोका अधिकृतहरुलाई सडकमा उतार्दैमा सरकार र नेकपा कमजोर नहुने बरु, अझ शक्तिशाली हुने उनले बताए । आफूहरुले भर्खर पार्टी एकता गरेको र जनतामा जान बाँकी नै रहेको भन्दै उनले भने, ‘प्रतिक्रान्तिले निहँु खोज्न थालेको छ, भदौबाट अभियान छेड्नैपर्छ । जनताको तागत भनेको के हो देखाउनुपर्छ ।’
उनले सुरुमा पार्टी एकता टुटाउन र अहिले नेकपा र सरकारलाई बदनाम गर्ने नियोजित कसरत भइरहेको बताए । उनले कांग्रेससँग सरकारमा रहँदा अपमानित हुनु परेको र, सरकारले अलोकतान्त्रिक कामहरु गरेको भन्दै आलोचना गरे ।
जनताले बहुमत दिँदा समेत सरकार बनाउन फलामको च्यूरा सहज भएको उनले सम्भिए ।
अनसन बस्नु डा. केसीको काम
पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका प्रचण्डले डा. केसीको काम नै अनसन बस्नु भएको बताए । आफूलाई लोकतान्त्रिक भन्नेहरुकै सरकार भएको बेला डा. केसी लामो समय अनसन बसेको स्मरण गर्दै उनले भने, के हेरेर बस्नु भएको थियो ।’
डा. केसी अनसनलाई नेपाली समाजले पचाइसकेको उनले बताए । उनले भने, उहाँको काम अनसन बस्नु हो । वार्ता हुन्छ, सहमति हुन्छ । यो पनि सामान्य प्रक्रिया हो ।’
प्रचण्डले डा. केसीलाई ककसको घेरामा परिसकेँ भन्ने हेर्न पनि आग्रह गरेका छन् ।
उनले अनसन बसेको भरमा सबै माग पूरा नहुने पनि दावी गरे । ‘एउटा व्यक्तिको मागलाई मानिदिनुपर्ने हो भने संसद किन चाहियो ?’ उनले भने ‘बीचबीचमा एक दुई जनालाई अनसन बस्न लगाइदियौं । उसले जे भन्छ त्यही मानौं ।’
प्रधानमन्त्रीको आलोचना : डा. केसीको अनसनको त्यान्द्रो समातेर कांग्रेसले राजनीति खोजेको
सरकारी मेडिकल कलेज प्रदेशहरूमा अब कहिले ?